ထူးအိမ်သင် နဲ့ စကားလုံးများလဲလှယ်ခြင်း - Thutazone
ရေးသားသူ – ဂျာနော
(myanmar music bird ဘလော့ကနေတဆင့် ထူးအိမ်သင်ချစ်သူများအတွက် ပြန်လည်ဝေမျှခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။စာရိုက်တင်ပေးတဲ့ မိတ်ဆွေကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးပါ)
သူနှင့်ကျွန်တော် စကားပြောဖြစ်ဖို့ စီစဉ်ထားသည်မှာကြာပြီ။ သို့သော် အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြားထဲ လွဲသွားရတာပဲ အဖတ်တင်သည်။ ယခု ပြောဖြစ်ကျတော့လည်း အတောမသတ်။ ကျွန်တော်က အမေးစကားလုံးတွေ သူ့ဆီ ထိုးအပ်လိုက်၏။ သူက အဖြေစကားလုံးများ ကျွန်တော့်ဆီ ပြန်ပို့ပေးသည်။ သူနှင့်ကျွန်တော်၏ “စကားလုံးများ လဲလှည်ခြင်း” အစီအစဉ်ဟု အမည်တပ်ရတော့မည်။
Q – ပထမဆုံးမေးချင်တာက ကိုထူးအိမ်သင် ဂီတကိုစပြီး စိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်၊ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဘယ်လိုဂီတတွေ ခေတ်စားနေပြီလဲ။
A – အဲဒီတုန်းက ဘာတွေထွန်းကားသလဲဆိုရင် အတော့်ကို ပြောရခက်တယ်။ ဟို စိုင်းထီးဆိုင်၊ စိုင်းခမ်းလိတ်တို့ Own Tune ပေါ့။ သူတို့ရေးတဲ့ သီချင်းအမျိုးအစားတွေကိုက နာမည်တပ်ဖို့ ခက်တယ်။ ပြောရရင် ငြီးငွေ့ဖို့ကောင်းတဲ့ (ဒိုင်ယာတောနစ်စကေး) နဲ့ ရေးထားတဲ့သီချင်းတွေ အများကြီး၊ ပြီးတော့ သီချင်းတွေကလည်း လေးလေးအီအီကြီးတွေ၊ အဲဒါမျိုးဆိုတော့ ဘာလိုဂီတမျိုးခေတ်စားနေသလဲ၊ ထွန်းကားနေသလဲဆိုတာ ပြောပြဖို့ခက်တယ်။ Slow Go Go တွေ ခေတ်စားနေတယ်လို့ ပြောရမယ်။ နောက် ကိုင်ဇာတိုခေတ်၊ Major Diatonic Scale နဲ့ရေးတဲ့ Foxtrot ရယ်၊ Minor Diatonic Scale နဲ့ရေးတဲ့ Foxtrot တွေ၊ Cha…Cha တွေ၊ Slow Go Go တွေ ။ အဲဒီလိုပဲ ပြောရမယ်။
Q – ဒါဆို အဲဒီဂီတတွေနဲ့ အရင်ဆုံး ထိတွေ့ရတာပေါ့ ဟုတ်လား။
A – ဟုတ်တယ်။ အဲဒါတွေနဲ့ အရင်ဆုံးထိတွေ့ ရတာပေါ့။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဂစ်တာစ,တီးတဲ့အချိန်က ဘယ်သူနဲ့တည့်တည့်တိုးသလဲဆိုတော့ ကိုင်ဇာနဲ့ တည့်တည့်သွားတိုးတယ်။ ၇၉၊ ၈၀ ကိုင်ဇာနဲ့ တည့်တည့်တိုးတယ်။ ကိုထီး(စိုင်းထီးဆိုင်) နဲ့ တိုးတယ်။ ပြီးတော့ (၇၉)မှာ ကိုခိုင်ထူး “အဉ္စလီ” စပြီး နာမည်ကြီးတာ။ ကိုခိုင်ထူးနဲ့တိုးတယ်။
Q – ကိုထူးအိမ်သင်က ဒီတေးရေး၊ တေးဆို လမ်းကြောင်းအတွက် ဂစ်တာတီးခဲ့၊ လေ့လာခဲ့…။ အဲဒီလို ကိုယ့်ရှေ့က အဆိုတော်တွေ၊ ဂီတအမျိုးအစားတွေနဲ့ ထိတွေ့ခဲ့ပြီး ပြောရရင် …….ရည်ရွယ်ချက်ပေ့ါလေ။
A – ဂစ်တာကိုစတီးတုန်းကတော့ ဘာမှရယ်ရွယ်ချက် မရှိပါဘူး။ သူများတွေ ဂစ်တာတီးတာကိုပဲ အားကျတာပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေဂစ်တာတီးတာကိုနားထောင်၊ သီချင်းတွေလိုက်ဆိုနဲ့ နောက်ကျတော့ သူများဂစ်တာတီးသလို ကိုယ်လည်းတီးချင်လာတယ်။ ဒါပါပဲ။ သူများတီးတာကို ကိုယ်ကလိုက်ဆိုရတာ အားမရတော့ဘူး။ ကိုယ်ဘာသာကိုယ်တီးပြီး ဆိုချင်တယ်။ အဲဒီကစပြီး ဂစ်တာတီးမိတာ။
Q – ဒါဆို အခု “ထူးအိမ်သင်” လို့ ဖြစ်လာရတာကရော…။
A – အဲဒါက ပြောဖို့ခက်တယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝလမ်းကြောင်း တစ်ခုလုံးပြောင်းသွားတာက အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ အရမ်းလည်းရှုပ်ထွေးတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း ဘယ်လိုမှန်း သေသေချာချာ မသိလိုက်ဘူး။ ဒီ Music ပေါ်ကို အာရုံစိုက်သွားတဲ့ စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အပြောင်းအလဲက အရမ်းကြီးမား၊ အရမ်းရှုပ်ထွေးပြီး အရမ်းလဲသိမ်မွှေ့တယ်။ အဲသလို အကြောင်းတရားတွေအများကြီး ပေါ်လာပြီး ဘာကြောင့်စူးစိုက်သွားရတယ်ဆိုတာကို ပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
Q – အဲဒီတော့ ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်ကျတော့…..
A – အော်..ကြားထားတဲ့သီချင်းတွေ၊ တိတ်ခွေထဲက သူများဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်တီးပြီး လိုက်ဆိုချင်တယ်။ဒါပဲ။ အဲဒါကြောင့်လည်း ဂစ်တာစတီးတာပဲ။ တီးရင်းတီးရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း စနစ်တကျဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကပေါ်လာတယ်။ ဥပမာ – GoGo ဆိုရင် ဒုံးချပ် ဒုံးဒုံးချပ်၊ Foxtrot ဆို ဒုံးချပ် ဒုံးချပ်၊ အဲသလိုမျိုး တီးနေတာ။ ဒါ..ဘာကြောင့် အဲသလို ဒုံးချပ် ဒုံးချပ် တီးရသလဲ။ ဘာကြောင့် Foxtrot လို့ခေါ်တာလဲ။ အဲဒါမျိုးတွေကအစ အခြေခံကျကျ သိချင်လာတယ်။ သိချင်လာတော့ အဲဒီတုန်းက သင်တန်း ဘာညာ မရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နယ်မှာ၊ တောမှာ နေရတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ ဒီလိုပဲ ညကျစုပြီးတော့ တီးကြ၊ ဆိုကြ…ဒီလောက်ပဲဆိုတော့ သင်တန်းတွေ၊ စနစ်တကျပြမယ့်ဆရာတွေ မရှိဘူး။ စနစ်တကျ တတ်တဲ့လူကလည်း အင်မတန်ရှားတယ်။ အဲဒီတော့ စာအုပ်တွေ လိုက်ရှာဖတ်ရတယ်။ အဲဒီအချိန်က ဘာစာတွေ သွားတွေ့သလဲဆိုတော့ ဂစ်တာ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ တို့၊ ဆရာဖြစ် ဂစ်တာပညာတို့၊ သိန်းတန်(မြန်မာပြည်) ဂစ်တာတီးနည်းတို့..။ အဲဒါမျိုးတွေ။ အဲဒီစာအုပ်တွေနဲ့ သွားတိုးတယ်။
တိုးတော့ လက်စွဲထားပြီး ဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်က ဦးကျော့မှူးရဲ့ဆရာဖြစ် ဂစ်တာပညာ၊ အဲဒီစာအုပ်လေးက အဟောင်းလေး၊ တစ်ပိုင်းတစ်စ၊ရှေ့မှာ ပြဲတောင်နေသေးတယ်။ အဲဒါလေး ရှားရှားပါးပါးတွေ့ပြီးတော့ အဲဒီစာအုပ်လေးဖတ်ပြီး။ နောက်..မောင်စစ်ငြိမ်း၊ ဂစ်တာ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ တွေ လိုက်ရှာတီး၊ ကျင့်၊ အဲဒီထဲမှာ Chord Construction, Chord တည်ဆောက်ပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံတွေ။ နောက် Scale သံစဉ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေ။ ပထမဖတ်ကာစတော့ နားမလည်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖတ်ရင်းဖတ်ပြီးတော့ ဂစ်တာ Finger Board ပေါ်မှာ ပြန်ရှာတီးကြည့်၊ ဖတ်ရင်း Finger Board ပေါ်မှာပြန်ရှာ၊ ပြန်တီးရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း သိလာတယ်။ သံစဉ်တည်ဆောက်ပုံ၊ ခုနှစ်သံစဉ်၊ ငါးသံစဉ်၊ Diatonic Scale, Pantatonic Scale, Cromatic ဆယ့်နှစ်သံစဉ် စသဖြင့်ပေါ့လေ..။
အဲဒီလို Scale တွေ၊ တည်ဆောက်ပုံတွေ သိလာတယ်။ နောက်… Chord တွေ၊ Major Chord ဆိုရင် ဒိုမီဆို၊ Minor Chord ဆိုရင် ဒိုမာဆို၊ Dominant Seventh Chord ဆိုရင် ဒိုမီဆိုလာ..အဲသလိုပေါ့။ Construction လေးတွေ သိလာတယ်။ အဲဒီလိုသိလာလေ၊ ပိုပြီးတော့ Music ပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားလာလေပဲ။ Effect ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပိုပြီးသဘောပေါက်လာတယ်။
Q – မသိမသာနဲ့ ဂီတရဲ့ဖမ်းစားခြင်းကို ခံလာရတယ်ပေါ့။ ဟုတ်လား။
A – ဒါတွေကလည်း စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတာ။ အလကားနေရင်း ဒုံးချပ် ဒုံးဒုံးချပ် လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ လူကြီးတွေပြောသလို
ဗြင်းဗြန်း ဗြင်းဗြန်း လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကို တဖြည်းဖြည်း လေ့လာရင်းနဲ့ သဘောပေါက်လာတာ။ ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားလာတာ။ အဲဒီမှာ အာရုံက ပိုပြီးတော့ စူးနစ်သွားခဲ့တာ။
Q – လူကြီးတွေရဲ့ဂစ်တာအပေါ်အမြင်ကတော့ တစ်မျိုးပဲနော်။
A – လူကြီးတွေကတော့ သိတဲ့အတိုင်း ရှုံ့ချတာပေါ့။ ကျွန်တော့်အဖေ ဆိုရင် ခဏခဏ ပြောဖူးတယ်။ “ဟေ့ကောင်..မင်းတို့ဂစ်တာကြီးက တဗြင်းဗြင်းပဲ ကြားနေရတယ်။ ဘာမှလည်း အသံမကြားရပါလား။ မင်းတို့သာ လက်က ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ လုပ်နေတာ၊ ငါကတော့ နားထဲမှာ တဗြင်းဗြင်းပဲ ကြားတယ်” လို့ ပြောတယ်။ 😀 အဲဒါကို ရှင်းပြချင်တယ်။
“အဖေ..အဖေကြားတာ၊ သိတာက မဟုတ်ဘူး။ သူ့မှာ စနစ်တကျ တည်ဆောက်ဖွဲ့စည်းထားတာတွေ ရှိတယ်။ စနစ်တကျ သတ်မှတ်ထားတာတွေ ရှိတယ်” လို့ ပြောချင်တာ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်က အဲဒီအချိန်မှာ ကောင်းကောင်းမသိသေးတော့ ကျွန်တော့်အဖေကို မရှင်းပြတတ်သေးဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီမှာ ပိုပြီး လေ့လာဖြစ်သွားတယ်။
Q – အဲဒီလို Music ကို လေ့လာပြီး ဘယ်နှစ်လောက်ကျမှ သီချင်းစ,ရေးဖြစ်တာလဲ။
A – အင်း .. သီချင်းရေးတာက ဂစ်တာမတီးတတ်ချင်ကတည်းကစရေးတာ။ ဟို ABBA စပြီးတော့ ခေတ်စားတဲ့အချိန်ပေါ့။ ဂစ်တာစပြီး မတီးခင် ၇၈ ခုနှစ်လောက်အချိန်လေး။ အဲဒီအချိန်လေးကျော်တော့ ဂစ်တာစတီးဖြစ်ပြီ။ အဲဒီအချိန်ဟာ ABBA စပြီး နာမည်ကြီးတဲ့အချိန်ပေါ့။ ဘာသီချင်း နာမည်ကြီးနေလဲဆိုတော့ Hastamanana အဲဒီသီချင်းကို အရမ်းကြိုက်သွားတယ်။
Hastamanana – ABBA Music Video
ကြိုက်ပြီး အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရတာကိုလည်း သိပ်ပြီး တစ်မျိုးကြီးပဲ။ ဒါကို မြန်မာလိုပြန်ဆိုချင်တာ။ ဂစ်တာကလည်း မတီးတတ်သေးဘူး။ ဂစ်တာမတီးတတ်ပေမယ့် အဲဒီအချိန်က ဘာလုပ်လဲ ဆိုတော့ ဟို..ပုသိမ်မှာ ဘင်ခရာအဖွဲ့ထဲ ကျွန်တော်ဝင်ထားတယ်လေ။ ပုသိမ်မှာ ပထမဆုံးစဖွင့်တဲ့ ဘင်ခရာသင်တန်းမှာ ကျွန်တော်ပါတယ်။ အဲဒီဘင်ခရာအဖွဲ့မှာ ကျွန်တော်အစုံလုပ်တယ်။ Side Drum တီးတယ်။ ဘင်တီးတယ်။ Symbal တီးတယ်။ ပုလွေမှုတ်တယ်။ ပုလွေကတော့ အိမ်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူရှိတယ်။ အဲဒီပုလွေလေးနဲ့ ခုနသီချင်းကို မှတ်မိအောင် ပြန်ပြီးမှုတ်ကြည့် ပြီးတော့ Notes ကလေး ရေးချသွားတယ်။ ရေးချထားပြီး သီချင်းကလည်း အမြဲတမ်း ကြားနေရတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ ကက်ဆက်ကလည်း မရှိဘူး ကက်ဆက်ကလည်း အရမ်းရှားနေတဲ့အချိန်။ ဒီတော့ ရေဒီယိုကနေ လာတဲ့အခိုက် ဖမ်းဖမ်းမှတ်ပြီးတော့ Notes ကလေး ရေးရေးထားရတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာလို ပြန်ရေးတယ်။ အဲဒီသီချင်းရေးတော့ ဂစ်တာမတီးတတ်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် “ကန္တရနှလုံးသား” လို့ အမည်တပ်ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဟဲရတာ။ အဲဒါ ပထမဆုံး စရေးတဲ့သီချင်း။
Q – အဲဒီသီချင်းလေးကို ခင်ဗျားအဆိုတော်ဖြစ်တော့ ပြန်ဆိုသေးလား။
A – ဟာ…ဘယ်ဆိုဖြစ်တော့မလဲ။ ကောင်းကောင်းတောင် မမှတ်မိတော့ဘူး။ အရမ်းရယ်ရတယ်။ အဲဒီအချိန်က ကလေးအတွေးနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာသားတွေ ဟဲ..ဟဲ…။
Q – သီချင်းရေးဆရာတိုင်း ကိုယ့်သီချင်းကိုယ် Arrangeလုပ်နိုင်သလားဗျ။
A – မလုပ်နိုင်ဘူး။ အဆိုတော်ဆို ပိုတောင်ဝေးသေး။ ခင်ဗျားကလည်း ဂစ်တာတီးတတ်တဲ့ အဆိုတော်တောင် ခပ်ရှားရှား၊ မိန်းမအဆိုတော်ဆို ပိုတောင်ဝေးသေးတယ်။
Q – ဒီ Rock N’ Roll တို့၊ Country တို့ဟာ jazz တို့၊ Blue’s တို့ကနေ တော်လှန်တိုးတက် ပြောင်းလဲလာတာလို့ ပြောလို့ရသလား။
A – အင်း..ရတယ်။ ဒါအဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဖြစ်စဉ် Evolution ။ Music ရဲ့ Evalution ဖြစ်စဉ်ပေါ့။ Music ရဲ့ အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲတိုးတက်မှု ဖြစ်စဉ်ပေါ့။ အဲဒါရှိတယ်။ပြောလို့ရတယ်။
Q – ဒါဆိုရင် ကဗျာလောကမှာ အငြင်းပွားသလိုမျိုး၊ ဂန္တဝင်ကျေမှ မော်ဒန်ရေးရမယ်တို့၊ မော်ဒန်ရေးသာရေး၊ ဂန္တဝင်ပြန်ကြည့်စရာ မလိုဘူးတို့၊ အဲသလိုမျိုး Heavy Metal တို့၊ Rock တို့ဟာ…..Jazz တို့ Blue’s တို့က လာတာ၊ ပြန်ကြည့်ဖို့ သင့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါသလား။
A – အဲသလိုသိရင် ပိုကောင်းတယ်။ အခုကတော့ ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ လုပ်ကြတာတွေ များတယ်လေ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီဥစ္စာတွေလုပ်နေရင်းနဲ့ အလိုလို အဲဒီ Blue’s တို့၊ ဘာတို့ ဆက်နွယ်ပြီးတော့ လေ့လာဖြစ်သွားတာ များတယ်။ အဲဒီတော့ သီးခြားကြီး တည်ရှိ နေတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ Metal ကို လေ့လာရင် ဒီ Metal သီချင်းကို တည်ဆောက်ထားတဲ့ Scale က ဘာ Scale လဲ ဆိုတာ လေ့လာနေရပြီ။ ဒီစကေးကို သိတော့ ဒါ Blue’s Scale နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ Metal အမျိုးအစား၊ Blue’s Scale နဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့ Metal သီချင်းဆိုတာ သိလာရင် ဒီ Blue’s Scale ကိုလေ့လာရပြီ။ ဒါနဲ့ အလိုလို Blue’s Music ကို လေ့လာမိသား ဖြစ်သွားတယ်။
Q – အရင်တုန်းက အဲဒီ Heavy တို့၊ Metal တို့ကို နားထောင်ရတာ အရသာလည်းမတွေ့ဘူး။ အသံတွေက ပြင်းပြင်းတွေနဲ့ တစ်ခါတစ်ခါအော်နေတာပဲသိတယ်။ အဆိုတော်ရဲ့ပင်ကိုယ်သံရယ်၊ သီချင်းစာသား တွေရယ်၊ တေးဂီတသံတွေရယ်။ အတော့်ကို ရောထွေးနေတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ အခု………..
A – ဒါက သီချင်းပုံသဏ္ဍာန်တွေ ပြောင်းလဲလာတာလည်း ပါတယ်။ ပထမဆုံး Heavy Metal ရယ်လို့စပြီး ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ …. သူ့သီချင်းတွေက တကယ့်ကို Melody မဲ့တဲ့ သီချင်းတွေပဲ။ တေးသွား အနိမ့်အမြင့် တော်တော့်ကို နည်းတယ်။ ဟို..အဓိကကပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆူညံအော်ဟစ်ပေါက်ကွဲနေတာပဲ များတယ်။ အဲဒီတော့ သီချင်းဆိုနေတာထက် အော်ဟစ်နေတာက ပိုများတယ်။ Melody ပုံစံကျကျပေါ့လေ။ ပုံသဏ္ဍာန်တိတိကျကျ လှလှပပရှိတဲ့ Melody မျိုးတွေ မဟုတ်သေးဘူး။ ဒီ Heavy Metal စပေါ်တဲ့အချိန်က ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် နားထဲမဝင်ခဲ့ဘူး၊ အော်ဟစ်နေတာပဲ ကြားတယ်။ ဒရမ်သံ ပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေ၊ ဂစ်တာတွေ လက်ကုန်ဖွင့်ပြီး တဗြီးဗြီး တဗြဲဗြဲ မည်အောင် တီးမယ်။ ဆိုတဲ့လူကလည်း ဆူညံအော်ဟစ်ပြီး ပေါက်ကွဲနေမယ်။ အဲဒါမျိုးကနေစပြီး Heavy Metal ပေါ်လာတာ။
နောက်ပိုင်းကျ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆင့်ကဲတိုးတက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်။ အစပိုင်းကတော့ နည်းနည်းပရမ်းပတာ ဆန်တာပေါ့။ သိပ် ပုံသဏ္ဍာန်အတိအကျ မပေါ်သေးဘူး။ စည်းကမ်းစနစ်ဆိုတာလည်း မရှိသေးဘူး။ နောက်ပိုင်းကျတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဒီ Heavy Metal Music အမျိုးအစားတစ်ခု ခိုင်ခိုင်မာမာ ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်လွင် တိကျလာတယ်။ ရေးတဲ့ဆိုတဲ့ အပိုင်းတွေလည်း လှလှပပ ပညာသားပါပါ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီတော့မှ Metal Music မှာ အမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်ကွဲလေးတွေ ပေါ်လာကြပြီးတော့ Blue’s Metal တို့၊ Pop Metal တို့၊ Classic Metal တို့ အဲဒါမျိုးလေးတွေ ပေါ်လာတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့နားထဲမှာ ပိုပြီးတော့ ဝင်လာတာက Blue’s Metal ရယ်၊ ဟို..Melodic Metal ပေါ့။ Melody လှလှပပလေးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းရေးထားတဲ့ ဆိုထားတဲ့ အမျိုးအစားတွေပေ့ါ။ Europe တို့၊ Bon Jovi တို့ အဲဒီလို အဖွဲ့ထဲက ပေါ်လာတယ်။ သူတို့ရေးကြ၊ ဆိုကြတဲ့ သီချင်းတွေက လှလှပပ ပုံစံကျကျ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့နားထဲ ဝင်လာတယ်။ ခံစားလို့ ရလာတယ်။
Q – အခု ကျွန်တော်တို့မှာ Heavy Metal တို့၊ Heavy Rock တို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဆိုနေကြတာက မူရင်းခွေရဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်မှုကိုပဲ ပြန်သုံးလိုက်တာပေါ့ ဟုတ်လား။
A – အဲ..သူတို့ကတော့ အဲဒီသဘောနဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ကြတယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း တချို့တွေက တပ်တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကိုက်ညီအောင် မှန်လာကြတယ်။ ဟို အစပိုင်းကတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ကြဘူး။ Heavy Metal ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပေမယ့် Metal မဟုတ်တဲ့ တခြား Rock သီချင်းတွေလည်း ပါနေတတ်တာပဲ။ Rock N’ Roll တွေ ပါနေတတ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် Country Rock တွေ ပါနေတတ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း တခြား Progressive Rock တွေ ပါနေတတ်တယ်။ အဲသလို ရောထွေးနေတယ်။ ဒါတွေကို Heavy Metal လို့ ပြောမရတဲ့ Rock အမျိုးအစားတွေ။
Q – ကိုထူးအိမ်သင်က ဘယ်လိုဂီတအမျိုးအစားထိ သီဆိုနေပါသလဲ။
A – အလွန်ဆုံး Slow Rock အဆင့်ထိပဲ ရှိပါတယ်။
Q – ခင်ဗျားအနေနဲ့ အခြားဂီတအမျိုးအစားတွေကို သဘောမကျလို့လား
A – သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်သဘောကျတိုင်း ကိုယ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆလို့မှ မရနိုင်တာ။ ဥပမာ – လူတစ်ယောက်ဟာ Jazz ဂီတကို သဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့် Jazz ဂီတကို သူကိုယ်တိုင် လုပ်ဖို့ကျတော့ သူ့မှာ ဒီစွမ်းရည်ရှိဦးမှကိုး။ ဒါနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ သူ့ပင်ကိုယ် အရည်အချင်းလည်း ရှိဦးမှကိုး။
Q – ဟို…ကျွန်တော်ကြားဖူးတာလေး တစ်ခုရှိတယ်။ “ ငှားဝတ်တဲ့ အကျီ ၤဟာ ဘယ်လိုမှ အံဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်နိုင်ဘူး ” ဆိုတာလေ။
A – ပြောကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေကျတော့လည်း…ဖြစ်သွားတာပါပဲ။ အကျီ ၤငှားဝတ်တယ်ဆိုပေမယ့် အလကားကြီး မျက်စိမှိတ်ပြီး ဥပမာ ပေါင်(၂၅၀)လောက်ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျီ ၤကို ပိန်ပိန်လေးက ဘယ်ငှားဝတ်မလဲ။ ကျွန်တော့်လို..ပေါင်(၁၀၀)ဝန်းကျင်လောက် ရှိတဲ့လူ၊ ကျွန်တော့်လို ခန္ဓာနီးပါးလောက်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဆီကပဲ ငှားဝတ်မှာပေါ့။ အဲသလို နည်းနည်းပါးပါး ဆင်ခြင်ဉာဏ်ကလေးနဲ့ စဉ်းစားတွေးဆပြီး ငှားဝတ်တဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်တောင်မှ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ကြီးမားပွယောင်း နေတာတို့၊ တိုးကြပ်သေးပြီးတော့ မဆန့်မပြဲ ဖြစ်နေတာမျိုးလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။
Q – မေးဦးမယ်ဗျာ။ အဲဒီ ဦးကျော့မှူး ဂီတစာအုပ်တွေ၊ ဘာတွေကို လေ့လာတီးခတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း Music နဲ့ပတ်သတ်ပြီး စူးနစ်လာတဲ့အပိုင်းရောက်ရော..ဘယ်လောက်ထိဆက်ပြီး လေ့လာဖြစ်ခဲ့လဲ။
A – အဲဒါ မော်လမြိုင်ကို အမေတို့နောကိကို ကျွန်တော်လိုက်သွားတဲ့ အချိန်ကစပြီး ပြန်ပြောရလိမ့်မယ်။ အဲဒီမော်လမြိုင် ရောက်သွားတဲ့ အချိန်က အရပ်ထဲမှာ ဂစ်တာတီးတဲ့ ချာတိတ်တွေနဲ့ ခင်သွားတယ်။ ပြီးတော့ အတူတူတွဲပြီး ညဘက် ဂစ်တာတီးဖြစ်ကြတယ်။ ဂီတာတီးနေရင်းနဲ့ သူတို့ထဲက လူငယ်တစ်ယောက်က ပြောတယ်။ သူ့မှာ ဆရာတစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်ကလည်း အမြဲတမ်းပြောပြောနေဖူးတယ်။ “ကျွန်တော်ဗျာ…အရမ်းသင်ချင်တယ်။ Notaion တွေ၊ ဘာတွေ သေသေချာချာ စေ့စေ့စပ်စပ် သင်ပေးနိုင်မယ့် ထိထိရောက်ရောက် သင်ပေးနိုင်မယ့် ဆရာ၊ တကယ်လည်း တတ်ကျွမ်းနားလည်တတ်သိတဲ့ ဆရာမျိုးဆိုရင် အရမ်းသင်ချင်တယ်” လို့ပြောဖူးတယ်။
အဲဒါကြောင့် သူက ပြောတာ။ ဆရာတစ်ယောက်ရှိတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး သင်ပေးနေတာပေါ့။ တကယ်လည်းတတ်တယ်။ အဘိုးကြီးအသက်တော့ကြီးပြီ မော်လမြိုင် တက္ကသိုလ်သွားတဲ့လမ်းနားမှာ နေတယ်ပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော့်ကို လိုက်ပို့ပေးစမ်းပါဆိုပြီး တောင်းပန်၊ ဒါနဲ့ ဒီကောင်က အိမ်လိုက်ပို့မယ်ဆိုပြီး သွားကြတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော့်ဆရာဖြစ်မယ့် အဖိုးကြီးကို တွေ့ရတော့တာပဲ။ အိမ်ပေါ်တက်မယ်လည်းကြံရော၊ ဘိနပ်ချွတ်ပဲ တက်ရသေးတယ် အဖိုးကြီးက ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်က ထလာပြီး “ သူငယ်ချင်း ကိုယ်အသက်ကြီးပြီ အဲဒါတွေမလုပ်တော့ဘူး။ မလာနဲ့ သွားတော့” လို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော် ဖိနပ်ချွတ်ပဲ တက်ရရုံရှိသေးတယ်။ ခြေထောက်တစ်ဖက်က တန်းလန်းကြီး၊ ကျွန်တော်တို့လည်း သွားဖြဲလေးတွေနဲ့ ဖြစ်သွားတာပေါ့။ “ဆရာ..ကျွန်တော်တို့ သိချင်တာ၊ မေးချင်တာလေးတွေ နည်းနည်းရှိလို့ လာတာပါ” လို့ပြောလိုက်တယ်။
“ ဒါဆိုလည်း တက် လာ…လာ” တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ကုပ်ချောင်းကုပ်ချောင်းလေးတွေ ထိုင်နေကြရတယ်။ နောက် .. “ခင်ဗျား ဘာသိချင်တာလဲ” လို့ မေးတယ်။ ကျွန်တော်က Notation နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိချင်ပါတယ်လို့ပြောတော့“ ခင်ဗျာ Notation ကိုပြောတော့ Note ဘယ်နှစ်မျိုးရှိတာ သိလို့လဲ” ဆိုပြီး ပြန်မေးရေ။ ကျွန်တော်သိထားတာက တစ်နှစ်သုံးနဲ့ ရေးထားတာ အိုရီရင်တယ်နုတ် (အရှေ့တိုင်းသုံး) သင်္ကေတပေါ့။ ဒီပဲတီပင်ပေါက်လို မျဉ်းငါးလိုင်းနဲ့ ရေးထားတာကိုတော့ အင်တာနေရှင်နယ်နုတ်(ကမ္ဘာသုံး) သင်္ကေတပေါ့။ အဲသလိုမျိုး ကျွန်တော်နားလည်ထားတာကိုး။ အဲဒါနဲ့ နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ “ ဟုတ်ပြီ ဘာနဲ့ဘာလဲ” လို့ ဆက်မေးတယ်။ ကျွန်တော်က အိုရီရင်တယ်နုတ်နဲ့ ပတ်ကား..အဲ…အင်တာနေရှင်နယ်နုတ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။
ဒီတော့ အဲဒီဆရာကြီးက ဘာပြောသလဲဆိုရင် “ သူငယ်ချင်း လုံးဝမဟုတ်ဘူး မှားတယ်” တဲ့။ ဟာ..ဟုတ်ကဲ့ဆရာ၊ ဘာနဲ့ ဘယ်လိုနှစ်မျိုးလဲလို့ ပြန်မေးရတာပေါ့။ “ မှတ်ထား နုတ်မှာ နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ အဲဒါက Note on the Line နဲ့ Note Between the Lines ဆိုပြီး (၂)မျိုးပဲ ရှိတယ်။ သူပြောတာက လိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ သင်္ကေတနဲ့ လိုင်းကြားမှာရှိတဲ့ သင်္ကေတလို့ပြောတာ။ ဟဲ..ဟဲ..ကျွန်တော်လည်း သွားဖြဲလေးနဲ့ ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ အခု ဆရာပြောမှ သိပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ “ နေဦး ခင်ဗျားကျုပ်ကို ဆရာ..ဆရာ..ခေါ်မနေနဲ့ ခင်ဗျားကို ကျုပ် ဘာမှ သင်ပေးရသေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျား ကျုပ်ကို အန်ကယ်ခေါ်ရင်ရပြီ ” ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်လည်း ဟုတ်ကဲ့ အန်ကယ်၊ ဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်နဲ့ခေါ်ရင်း ဒီနေ့ထိ အန်ကယ်ပဲခေါ်ရတော့တယ်။ ရေရေလည်လည် ရီရတယ်။ အဲဒီကနေပြီး တဖြည်းဖြည်း သူနဲ့စကားပြောရင်း တည့်သွားပြီး ကျွန်တော့်ကို သင်ပေးတယ်။ အဲဒီကစပြီး သေသေချာချာ၊ စနစ်တကျ ပိုပြီး တိတိကျကျ လေ့လာဖြစ်သွားတယ်။ သူ့ဆီကလည်း စာအုပ်တွေ အများကြီးရတယ်။
Q – ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်လည်း သီချင်းတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သတိထား နားထောင်မိပါတယ်။ ဘာကို သဘောတကျ တွေ့ထိခံစားရသလဲဆိုရင် တချို့သီချင်းတွေမှာ တေးစာသားနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဂီတသံတွေကိုမြင်ရ၊ ကြားရတယ်။ အဲဒါ ဂီတသံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့လေ။ အဲဒီအသံရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ခေါ်မလား။ အဲဒါ ရှိသလား။
A – ရှိတယ်လို့ ယူဆနိုင်တယ်။ ဂီတသံမှာ ဘာသာဗေဒ။ အသံရဲ့ဘာသာဗေဒ၊ ဂီတမှာတင်မဟုတ်ဘဲ အခြားမှာရှိတဲ့ အသံတွေပေ့ါ။ အဲဒီအသံတွေအားလုံးမှာ ဘာသာဗေဒ ရှိတယ်။ အသံမှာကို သီးခြား ဘာသာဗေဒ ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ မြန်မာစကား၊ အင်္ဂလိပ်စကား စတဲ့ ဒီလိုဘာသာစကားမျိုးကိုပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ မည်သည့်ဘာသာစကားကြိုက်တဲ့ဘာသာစကားဖြစ်စေ ဒီဘာသာစကားကို ဖော်ဆောင်တဲ့ အသံတွေမှာကို သီးသန့် ဘာသာဗေဒရှိတယ်။ ဒီအသံတွေရဲ့အနိမ့်အမြင့်၊ တုန်ခါမှု၊ အစိပ်အကျဲ၊ အလေးအပေါ့၊ အတိုအရှည်၊ စသဖြင့် အဲဒီအပေါ်မှာ ဘာသာဗေဒဆိုတာ သပ်သပ်ကိုရှိတယ်။ အသံရဲ့ Language..၊ Audio Language ဒါအသံလှိုင်းနဲ့ အကျုံး ဝင်တယ်။
Q – ခင်ဗျားသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုပဲ ထုတ်ပြီး မေးရဦးမယ်။ တေးစာသားတွေက ရာဇဝင်အမှတ်တရ၊ အလွမ်းနဲ့အလွမ်းထဲက ပေါက်ဖွားစေတဲ့ အား၊ အချစ်၊ အဲ..တီးခတ်ထားတဲ့ ဂီတသံကလည်း နေရာတစ်ခုကိုပြန်ခေါ်သွားသလိုလို ဖြစ်တည်နေတယ်။ အဲဒါမျိုးကျတော့…..
A – သီချင်းတစ်ပုဒ်မှာ အပိုင်း ၂ ပိုင်းရှိတယ်။ အဲဒီမှာ Lyric အပိုင်းနဲ့ Music ဂီတဖွဲ့စည်းမှုအပိုင်းနဲ့ စာသားဖွဲ့စည်းမှုအပိုင်းဆိုပြီး ၂ ပိုင်း ရှိတယ်။ အဲဒီနှစ်ခုစလုံးက အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကို ဖော်ဆောင် ရမှာဖြစ်တယ်။ စာသားဖွဲ့စည်းမှု ပြင်းထန်ပြီးတော့ တက်ကြွပြီး ပေါက်ကွဲတဲ့ ခံစားမှုကို ဖော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ ဒီ Lyric ကို နောက်ကနေ ပံ့ပိုးပေးတဲ့၊ ထောက်ခံပေးတဲ့ Music က ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေပြီး လေးလံထိုင်းမှိုင်းတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဖော်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင် ဖြစ်မလား ဒီနှစ်ခုဟာ လုံးဝ ဆန့်ကျင်နေပြီ။ ပေးချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေးချင်တဲ့ခံစားမှုကို လုံးဝ အပြည့်အဝရနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ပျက်တောင်ပျက်စီးသွားနိုင်သေးတယ်။
စာသားရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ ဖွင့်ဆိုမှုကြောင့်သော်…အော်..ဒါပေါက်ကွဲနေပါလား။ သူပြင်းထန် တက်ကြွနေပါလားဆိုပြီးတော့ စကားလုံးကြောင့်သာ သိမယ်။ နောက်ကနေ တီးခတ်ပေးနေတဲ့ Music က ဂီတက၊ အိလေးဆွဲ ပြီးတော့ ပျင်းရိလေးလံထိုင်းမှိုင်းနေရင် စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှ အပြည့်အဝ ခံစားလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီ Lyric က ပေးတဲ့ ခံစားမှုနဲ့ အနောက်က Music ကပေးတဲ့ ခံစားမှုနဲ့ တစ်ထပ်တည်း ကျနေဖို့ လိုအပ်တာပေါ့။ ဒါမှ ကိုယ် ရည်ရွယ်တာကို ဖော်ဆောင်တာကို စူးရှရှ ဖော်ဆောင်လို့ရမယ်။
Q – ဒီတော့ ခင်ဗျားသီချင်းတွေ(ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်) ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါ ဘာကို အရင်ဖွဲ့စည်းသလဲ၊ တေးစာသားလား။
A – မဟုတ်ဘူး၊ အရင်တုန်းကတော့ အဲဒီနည်းကို သုံးဖူးတယ်။ စာသားတွေ ရေးချပြီးမှာ ဂစ်တာတစ်လက်နဲ့ အသံတွေ လိုက်ထည့်တာမျိုး သုံးဖူးတယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့လည်း ဒီသီချင်းတော်တော်များများ ရေးဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း ဘာသွားတွေ့ရသလဲဆိုတော့၊ အဲဒီနည်းကို.. သုံးခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Music အနေအထားကို မရောက်ဘူး ဆိုတာ သိလာရတဲ့အပြင် စာသားပေါ်မှာ အလေးသွားထည့်တော့ စာသားရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကို Music က ခံနေရတယ်။ စကားလုံးတွေရဲ့ခေါ်တဲ့နောက်ကို Music က ပါသွားရော။ ဘာပဲပြောပြော… စကားလုံးမှာ အသံရှိတယ်။ အဲဒီတော့ စကားလုံးတွေမှာရှိတဲ့ အသံတွေခေါ်တဲ့နောက်ကို Music က လိုက်သွားနေရတယ်။ ဒီတော့ Music နဲ့ စကားလုံးတွေ မမျှတော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို စိတ်ထဲက စဉ်းစားထားတယ်။ စဉ်းစားထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ…အများကြီးရလာမှ မှတ်စုထဲမှာ ချရေးထားတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်းခေါင်းထဲမှာပဲ မှတ်ရင်မှတ်ထားလိုက်တယ်။ အဲ..မှတ်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာကို အမြဲတမ်း သတိရနေတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ မကြာမကြာ ခေါင်းထဲမှာ သီချင်းအဖြစ် ရေးလို့မပြီးသေးဘဲ…သီချင်းဖြစ်မလာသေးတဲ့ အထိပေါ့လေ။ အဲဒီအကြောင်းအရာကခေါင်းထဲမှာ တလည်လည် ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ အချိန်တိုင်း ဒီအကြောင်းအရာကို ခေါင်းထဲမှာပဲ သိမ်းဆည်းထားလို့ပြောလို့ရတယ်။
အဲ…နောက်တစ်ခုပေါ့လေ။ စိတ်ထဲမှာ…ခေါင်းထဲမှာ ပေါ်လာတဲ့အသံတွေကို ချပြီးရေးသွားတယ်။ ချပြီးရေးထားတာတွေကို တီးကြည့်၊ မကြိုက်ရင်ထား။ နောက်ထပ်ရတဲ့အသံတွေကို ချရေး၊ ပြန်တီးကြည့်နဲ့ Music ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခု ပီပီသသ ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ..။ ဒီ Music ထဲမှာ စောစောက ကိုယ်သိမ်းဆည်းထားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ မြောက်မြားစွာထဲက အကြောင်းအရာတစ်ခုက အံကျသွားဖြစ်နေရော။ အဲဒီအခါကျတော့ သိပ်ပြီးအားစိုက် ရတာမျိုး မရှိတော့ဘဲ ဒီ Music ထဲကို words တွေက လျောကနဲ ဝင်သွားတယ်။ အဲဒီလို သီချင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ်ပြည့်စုံသွားပြီဆိုတော့ ခေါင်းထဲမှာ တဝဲဝဲလည်လည်ဖြစ်နေတဲ့ ဒုက္ခပေးနေတဲ့ ကိစ္စတွေ ပျောက်သွားတော့တယ်။
Q – ကော်ပီသီချင်းတွေကျတော့ Music ရဲ့ ခုတ်ထစ်လှီးဖြတ်ခြင်းကို စာသားတွေက ခံရပြန်ရော မဟုတ်လား။
A – ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် စကားလုံးမှာ ပရိယာယ် အများကြီး ရှိတယ်။ Music မှာ ပရိယာယ်နည်းတယ်။ ဥပမာ – ဒီအသံ တစ်ခုဟာ ဒို..မီ..ရေ ဆိုရင် ဒို..မီ..ရေ ပဲသွားရတယ်။ အဲဒါကို ဒို..ရေ..မီ ဆိုရင် သူက MOOD ပါ ပြောင်းသွားတယ်။ ဒို..မီ..ရေ သွားရင်သွား၊ မသွားရင် ရေ..ဖာ..မီ သွားရင်သွား အဲသလို မသွားရင် မရသလိုမျိုး၊ ခွင်ကျဉ်းတယ်။ စကားလုံးကျတော့ ပရိယာယ်များတယ်။ သွားတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးမှာကိုက နားတယ်တို့၊ ဒိုးတယ်တို့၊ ယွန်းတယ်၊ ရွှေ့လျားတယ်၊ ဖြုန်းတယ်..အဲသလိုမျိုး စကားလုံးက အများကြီးရှိတယ်။ ဆိုတော့ Music ထဲမှာ စကားလုံးအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး အကြောင်းအရာကို ခံစားလို့ရအောင် ထည့်သွင်းနိုင်တယ်။ ဒီအကြောင်းအရာဝင်အောင် Music က ချိုးဖဲ့တာထက်စာရင် Music ကို ဒီအကြောင်းအရာထဲဝင်အောင် စကားလုံးတွေကို တိုက်စားတာက ပိုပြီးလွယ်တယ်။ စကားလုံး တွေကို အရင်ရေးချပြီး Music ကို ဒီစကားလုံးတွေထဲသွင်းရင် ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျနိုင်တဲ့ Music ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ အင်မတန် ကံကောင်းတဲ့အခါမျိုးက လွဲလို့ပေါ့လေ။ ကံကောင်းတယ် ဆိုတာကလည်း ကိုယ်ရေးထားတဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့ရမ်သမ်က ဒီ Music အတွက် အတော်ကြီး အဆင်ပြေနေမှ ကောင်းနိုင်မယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့ Sorry ပဲ။ ဒါကြောင့် Music ထဲ စကားလုံးတွေ ထည့်တာက ပိလွယ်တယ်။ စကားလုံးက ပရိယာယ်များလို့။ အဲ..ဒါဆိုရင် Music အနိုင်ကျင့်မှုကို စကားလုံးတွေက မခံရဘူးလားလို့ အပြန်အလှန် မေးရင်တော့၊ ခံရတယ်လို့ပဲ ဖြေရမယ်။ ဒါပေမယ့် ခံရပေမယ့် စကားလုံးက ပရိယာယ်များတဲ့အတွက်၊ Music ကို မလိမ့်တပတ် လက်တစ်လုံးခြား လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် အခံရသက်သာတယ်။
Q – ခင်ဗျား တစ်ခါတုန်းက ပြောဖူးတယ်။ ကော်ပီသီချင်းဆိုတာ ခင်ဗျားအတွက် အဆိုသင်တန်း တက်ကြည့်တဲ့ သဘောတဲ့။ အခု ခင်ဗျားအနေနဲ့ ကော်ပီသီချင်း စီးရီးနှစ်ခွေ ဆိုပြီးသွားပြီလေ။ ဘာတွေ တွေ့ကြုံရလဲ။
A – ကော်ပီဆိုရတာက နဂိုသိထားတာထက် ပိုပြီး သဘောပေါက် လာတယ်။ တကယ်ဆိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ ကော်ပီမှာ လွယ်တဲ့ အပိုင်းတွေ ရှိသလို၊ ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲဒါ အတော်ကို ကြေကြေလည်လည် ရှင်းမှရမယ်။ ဥပမာ…. အကြမ်းဖျင်းပြောရရင် သူ့ Original မူရင်းစာသားရဲ့ Theme၊ သူ့ မူရင်းသီချင်း Theme အတိုင်း ပြန်ရေးထားတဲ့ သီချင်းပေါ့လေ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ရင် တစ်မျိုးဖြစ်ဦးမယ်။ စာသား..ဟိုမူရင်းသီချင်းရဲ့ အကြောင်းအရာအတိုင်း ပြန်ရေးထားတဲ့ စာသားကိုပြောတာ။ အဲဒီလို သီချင်းမျိုးဆိုရင် နဂိုကတည်းက မူရင်းအဆိုတော်ရဲ့ ဆိုထားတာကို ကြားရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်နေရာမှာဘယ်လို Expression လုပ်ရမယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို Style လုပ်ရမယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုအသံလှည့်စားရမယ်၊ ဘယ်လိုအသံမျိုးလေး ထွက်အောင်ဆိုရမယ်ဆိုတာကို Own Tune ဆိုသလိုမျိုး ရှာဖွေ စဉ်းစားစရာ မလိုတော့ဘူး။
Own Tune ဆိုစဉ်က ဒီနေရာ ဒီစာသားလေးကို ဘယ်လို Expression, Style နဲ့ဆိုရင် ကောင်းမလဲ။ ဒီအသံနဲ့ Tone ကို ဘယ်လိုလုပ်ရရင် ကောင်းမလဲ။ တည်တည်ကြည်ကြည် ဆိုရမလား။ ကွဲကွဲရှရှ ဆိုရမလား… စသည်ဖြင့် Mood နဲ့ Expression နဲ့ Tone နဲ့ကို စဉ်းစားပြီး ရွေးချယ်ရှာဖွေရသေးတယ်။ ကော်ပီမှာကျတော့ မူရင်းအဆိုတော်က ရှာဖွေပေးပြီးသား၊ ဘယ်နေရာရောက်ရင် ဘယ်လိုလေး ဆိုရမယ် ဆိုတာ အသံလေးကို ဘယ်နေရာမှာ ကွဲရမယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို Mood နဲ့ Express လုပ်ရမယ်ဆိုတာ မူရင်းအဆိုတော်က ကိုယ့်ကို ပြပေးပြီးသား။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော် အကြောင်းအရာက သူ့မူရင်းအကြောင်းအရာအတိုင်း ဖြစ်နေရမယ်။ မြန်မာလို ပြန်ရေး ထားတာက အဲဒီလိုဖြစ်ရမယ်လို့ ပြောတာ။
ဒါမှမဟုတ်လည်း အကြောင်းအရာက သူ့မူရင်းနဲ့ တော်တော်နီးစပ်တဲ့စာသား ဖြစ်ရမယ်။ ဒါမှ သူ့ရဲ့မူရင်း Mood နဲ့ Expression နဲ့ Tone ကို ကိုယ်က လိုက်နင်းလို့ရမယ်။ တခြားအကြောင်းအရာကြီး ထည့်ထားရင်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်စဉ်းစားရမယ်။ Own Tune ဆိုရသလို ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ Theme အတူတူကျတော့ မူရင်းအဆိုတော် ကျောင်းထားပေးတဲ့ ခင်းထားပေးတဲ့အတိုင်း ပြန်ဆိုရတာမို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရှာဖွေရမှုတွေ လျော့သွားတယ်။ ကော်ပီသီချင်းဆိုတာ နောက်တစ်ပိုင်းရှိသေးတယ်။ အဲဒီလို မူရင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်း သူက ဒီနေရာလေးမှာ အသံကလေး လှည့်ထားရင် လှည့်ထားတဲ့အတိုင်း၊ တင်ရင်တင်၊ ဝဲရင်ဝဲ၊ ကွဲရင်ကွဲ လိုက်ဆိုဖို့ကျတော့ ကိုယ်လေ့လာထားတဲ့၊ ကိုယ်လေ့ကျင့်ထားတဲ့အပိုင်းနဲ့ လိုက်မိသလား၊ မမိဘူးလားဆိုတာ စကားပြောလာတယ်။ ကိုယ်လေ့လာ လေ့ကျင့်ထားတဲ့အပိုင်းက မမီသေးဘူးဆိုရင် အသည်းအသန် လိုက်လုပ်ရတယ်။ အဲဒီမှာ ခက်ခဲသွားရော။
Q – မူရင်းသီချင်းရဲ့အကြောင်းအရာ မဟုတ်ဘူးဗျာ။ ဒါပေမယ့် မူရင်းအဆိုတော် ဆိုသလိုမျိုး၊ ဆိုတတ်ရုံနဲ့ရော မရဘူးလား
A – ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားရဲ့ဒီသီချင်းအပေါ်မှာ ကြိုးစား အားထုတ်မှုတွေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာ ပရိသတ်က တန်းပြီး တန်ဖိုးဖြတ်သွားမှာပေါ့။ ခင်ဗျားဆိုတဲ့ ကော်ပီသီချင်းရဲ့ မူရင်းကို နားထောင်ကြဖူးသူတွေချည်းပဲ။ နားထောင်နေကြသူတွေ ချည်းပဲ။ ဒီနေရာမှာ မူရင်းအဆိုတော် ဘွန်ဂျိုဗီပဲ ထားပါတော့။ ဗွန်ဂျိုဗီ ဒီနေရာ၊ ဒီစာသားမှာ အသံကို ဘယ်လိုလေး…လုပ်သွားပြီဆိုတာ သူတို့(ပရိသတ်)က သိနေပြီးသား။ အဲဒါကို ခင်ဗျားပြန်ဆိုတဲ့အခါ အဲဒီနေရာမှာ အဲဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူး။ မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒီသီချင်းအပေါ်မှာ ခင်ဗျားရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှု အာရုံစူးစိုက်မှု ဘယ်လောက်ရှိတယ်၊ မရှိဘူးဆိုတာ သူတို့က တန်းပြီး တန်ဖိုးဖြတ်သွားမယ်။
Q – နေပါဦး..သံစဉ်ရှိပြီးသားပဲဗျာ။ မူရင်းသီချင်းရဲ့အကြောင်းအရာ ထားစမ်းပါ။ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ စာသားကို အဲဒီသံစဉ်ထဲ…ဝင်အောင် ထည့်ရေးရင်ရော။
A -နိုး..နိုး…အဲဒီလောက်နဲ့ဆိုရင်၊ တကယ်တမ်းကောင်းတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့၊ ကော်ပီသီချင်း ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျား.. မူရင်းသီချင်းကို သေသေချာချာ ခံစားထားသလား။ သီချင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ဘာလဲ၊ စာလုံးတစ်လုံးချင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ။ ခံစားမှုဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ နားလည်ရမယ်။ နားမလည်လည်း နားလည်အောင် ရှာဖွေရတော့မယ်။ ပြီးတော့မှ အဲဒီသီချင်းကို ခြုံငုံပြီး နားလည်အောင် ခံစားထားတဲ့အတွက် ဒီသီချင်းကို ပြန်ရေးတဲ့အခါ သူ့ခံစားမှုကို ပြန်ပြီးကူးပြောင်း ပေးနိုင်မှာပေါ့။ ရှင်းရှင်းလေးပါ။ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ဘာသာပြန်တာနဲ့ပဲ… စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဒီအဓိပ္ပာယ် ဒီအတိုင်းပြန်ပြီး ထည့်ပေး လိုက်ရုံနဲ့တောင်မှ ဒီကဗျာရဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိုင်း(ဘာသာ စကားအရပေါ့လေ) ဘာသာပြန်ကဗျာကောင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ကဗျာမှာရှိတဲ့ ခံစားမှု၊ ဘာသာစကား၊ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ အလှအပ။ အဲဒါလေးကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဟိုဘက်ကို ကူးပြောင်းပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရတယ်။ ပြောင်းပေးနိုင်လေလေ၊ ဒီဘာသာပြန်ထားတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် အရည်အသွေး တောက်ပြောင် လေလေပဲ။ အဲဒီသဘောပေါ့။
Q – အတတ်ပညာ အားကောင်းရင်ကော မရဘူးလား။
A – အတတ်ပညာသိရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူး။ ခံစားနိုင်ဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်ခံစားနိုင်သလို ပရိသတ်ခံစားနိုင်အောင် စီးကူးပေးနိုင်ဖို့ အားရှိရမယ်။ အဲဒါ ဦးနှောက်နဲ့တင် မဟုတ်ဘူး။ နှလုံးသားနဲ့ ဆိုင်သွားတယ်။
Q – အသံမှာ ဘာသာဗေဒရှိတယ်လို့ ဘယ်တုန်းကစပြီး သိတာလဲ။
A -အောင်ရင်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန် ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုပြီး…. ဆရာဦးဝင်းဖေနဲ့ ကြံစည်ဖူးတယ်။ အဲဒီမှာ Music ပိုင်း တာဝန်ယူဖို့ အောင်ရင်က အကူအညီတောင်းတယ်။ ကျွန်တော်လည်း လုပ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ ဆရာဦးဝင်းဖေဆီရောက်တော့ အောင်ရင်က မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ အဲဒီမှာ ဆရာဦးဝင်းဖေက “ ဟုတ်ပြီ Music လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာ သိပြီ။ အဲဒီတော့ ခင်ဗျား Audio Language သိလား ” တဲ့။ ဒီစကားလုံးကို အဲဒီအချိန်ကျမှ ပထမဦးဆုံး ကြားဖူးတာ။ “ ဟာ..ကျွန်တော်မသိဘူး ဆရာ ” လို့ပြောတော့။ “ အဲဒါဆိုရင် ခင်ဗျား ကျွန်တော်နဲ့ တစ်ပတ် တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်လောက်ပေါ့လေ။ စကားပြောကြရအောင် ” တဲ့။ စကားပြောရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ပြောပြသွားမယ်လို့ ဆရာဦးဝင်းဖေက ပြောတယ်။ စနစ်တကျ သင်တန်းပုံစံမျိုး သင်ကြားပေးတာတော့ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဆရာဦးဝင်းဖေကလည်း ပြောပါတယ်။ ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ ခင်ဗျားသဘောပေါက်သွားမှာပါလို့ ပြောတယ်။ တစ်နေ့… တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီလောက် ဆရာဦးဝင်းဖေဆီ ရောက်ဖြစ် ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။
Q – အင်း .. ခင်ဗျားပြောမှပဲ သတိရတယ်။ တချို့ Music တွေ နားထောင်ရင် အဲဒီဂီတဖွဲ့စည်းမှုက ဘာကိုဆိုလိုနေမှန်း သိသလိုလိုပဲ။
A – ခံစားသိပေါ့။ ကြားနေရတဲ့အသံ၊ ဒါတင်မဟုတ်ဘူး၊ အသံရဲ့နောက်မှာ တစ်ခုခုရှိနေတယ်ဆိုတာတော့ သိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် မပြောတတ်ဘူး။ တချို့ဆိုရင် Music ကိုနားထောင်ပြီး ဟော..လှိုင်းကလေးတွေ၊ ဟော..ငှက်ကလေးတွေ ထပြန်သွားတယ်လို့ ခံစားနိုင်ကြတယ်။ ဒါလည်းဟုတ်တယ်။ Classic ဂီတတွေ နားထောင်တဲ့အခါကျတော့ ပိုပြီးပေါ်တယ်။ ဟာ..စီးနေတဲ့ ရေပြင်ထဲမှာ ဝဲဂယက်ပလုံစီတွေ ထွက်လာတာတို့၊ မျက်စိထဲ မြင်လာတယ်။ သစ်လုံးအိမ်ကြီးနဲ့ မြက်ရိုင်းတောတွေ မြင်လာတယ်။ မြက်ရိုင်းပင်တွေ တနွဲ့နွဲ့..၊ သစ်လုံးအိမ်ကြီးပေါ်က ဖန်မီးအိမ်ကလေး တစ်ချက်ပွင့်လာပြီး ပိုးစုန်းကြူးတွေ ပျံသန်းတိုးဝင်နေတာမျိုး မြင်ရတယ်။ အဲဒီ Music မျိုးတွေ ရှိလာတယ်။
Q – အခုနောက်ပိုင်း အဲဒီ Audio Language နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လောက်တိုးတက်မှုရှိလာသလဲ။
A – အခြေခံ သီအိုရီကို ကြားဖူး၊ သင်ဖူးပြီးတဲ့နောက် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆက်ပြီး လက်တွေ့လေ့လာတယ်။ အခြေခံသီအိုရီကို လေ့လာရင်းနဲ့ သဘောပေါက်သွားတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
Q – ကဲ…ဘာပြောချင်သေးလဲ။
A – ဘာပြောစေချင်လို့လဲ။
ဟုတ်သားပဲ။ မေးသာမေးလိုက်ရသည်။ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် သူ့ကို ဒီထက်ပိုပြီး မပြောစေချင်တော့။ သည်လိုနှင့်…………………သူ့ဆီမှအပြန် နှလုံးခုန်သံ လှိုင်းကြပ်ခွပ်တို့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ တွတ်ထိုးနေတော့သည်။
ဘားလမ်းတစ်ဝိုက် Facebook Group တွင်တင်ထားသော မဂ္ဂဇင်းဓါတ်ပုံအား ဖတ်ရအဆင်ပြေအောင် စာရိုက်တင်ပေးသည်။
အသက် ၂၇နှစ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့အရပ်အပုဆုံးလူသား